NIN WATAY GAADHI LAGA SOO BUUXIYAY WAXYAALAHA QARXA OO ISKU QARXIYAY XARUN CIIDAMADA XAMAR | Toggaherer's Weblog
Qarax ismiidaamin ah oo uu fuliyay nin naftiisa halige ah ayaa isku qarxiyay xaruntii keydka shidaalka Haama Dhowr ee Degmada Xamar Jajab ee Magaalada Muqdisho, halkaasoo aheyd Keydkii Shidaalka Dowladda KMG.
Qaraxa Ismiidaaminta oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxaa uu mar kaliya gil gilay qeybo ka mid ah Magaalada, iyadoo goobtii lagu fuliyay ay qarisay uuro iyo qiiq, iyadoo la arkayayna holac ka baxayay.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, waxaana jira qasaaro xoog leh oo soo gaaray Ciidamada Dowladda KMG oo ku sugnaa Xaruntii Keydka Shidaalka.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya in gaariga qaraxa fuliyay uu dhowr jeer noq noqonayay saaka oo idil agagaarka xaruntaas, iyadoo qadaro yar kadib uu Gaariga galay Xarunta Keydka Shidaalka, isagoo jiiray ilaalo ku sugneyd afaafka hore ee xaruntaas.
Xaalada halka uu qaraxa is miidaaminta ka dhacay ayaa aad u kacsan, waxaana laga maqlayaa rasaas kala duwan, waxaana qaraxan uu qeyb ka yahay silasilado qaraxyo ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Muqdisho, taasoo sanadkan ka dhigeysa tii 3aad, waxaase tani ay tahay mid ku cusub Ciidamada Dowladda oo ah qaraxii u horeeyay ee ismiidaamin noociisa lala eegto, waxaana horay u jiray qaraxyo ismiidaamin ah oo lala eeganayay Ciidamada shisheeye ee ku sugan Magaalada Muqdisho